ဤ LEGO Adidas Superstar mech မော်ဒယ်သည်လမ်းလျှောက်ရန်တည်ဆောက်ခဲ့သည်
05 / 09 / 2021 05 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 184 Views စာ0မှတ်ချက် 10282, 40486 Adidas မူရင်းစူပါစတား, adidas, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်း LEGO စူပါစတား, Adidas မူရင်းစူပါစတား, Adidas စူပါစတား, Lego, Lego Adidas
၄၀၄၈၆ ကိုမည်သို့ပြရမည်ကိုမသိသောသူများ adidas Originals Superstar သည်စိတ်ကြိုက် mech ဖန်တီးမှုတွင်သူတို့ရှာဖွေနေခဲ့သောအဖြေကိုရနိုင်သည်။
တစ်စုံ Lego adidas ယခုထိရရှိနိုင်သောအစုံအပါအ ၀ င်အစုံကိုလူထုအားဖြန့်ချိခဲ့သည် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား အသေးစား ၄၀၄၈၆ adidas Originals Superstar လက်ဆောင်ဖြင့်ဝယ်ယူပါ။ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သောအခါအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သူများသည်၎င်းတို့နှစ်ခုအကြားအရွယ်အစားကွာခြားချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပုံကိုအံ့သွားနိုင်သည်။
ကျေးဇူးတင်စရာ, AprilB Twitter မှာဒီမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်တဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုရှိတယ်။ streamer သည်ထိုလမ်း ၄၀၄၈၆ ကိုအိမ်တစ်အိမ်သို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် adidas Originals Superstar နှင့်၎င်း၏ပိုကြီးသောပုံစံဘေးတွင်၎င်း၏ minifigure သည် shoebox ပုံစံ mech တစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
ဆုံးဖြတ်လိုက်သည် #လီဂို #adidas စူပါစတား minifig သည် mech လိုအပ်ပါသလား။ pic.twitter.com/PbLgb3AblU
- AprilB_RLFM ?? (@__ AprilB__) စက်တင်ဘာလ 2, 2021
တည်ဆောက်မှုသည်ဖန်တီးမှု၏ခြေဖဝါးအဖြစ်အခမဲ့ set နှစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးအုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောပုံစံတူဖြစ်သည် adidas သေးငယ်သောပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအသုံးအဆောင်များကိုအတုခိုးသောလက်တစ်စုံနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပုံစံသေတ္တာပုံစံပြုလုပ်ထားသည်။
မော်ဒယ်ပေါ်တက်ထိုင်ခြင်းသည်ပြုပြင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သည် VIDIYO BeatBox - ၎င်းသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြစ်သည် အများကြီးပိုရနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးမရ။ mech ၏ခြုံငုံပုံသဏ္ာန်သည်သေးငယ်သည့်ပုံသဏ္န်နှင့်တူသည်၊ ဖိနပ်အိတ်နှင့် ၀ တ်စုံသည်အရောင်နှင့်လိုက်ဖက်သည်။ 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား အဲဒါကိုလာမယ့်။
သင်မှာယူနိုင်ပါတယ် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား ယခုသင်ကိုယ်တိုင်အတွက်တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် 40486 နေရာကိုဆက်ကပ်ပါ adidas Originals Superstar ကိုအခမဲ့ပေးအပ်ခဲ့သည် ယခုပြီးဆုံးသွားပြီ.
← 71031 မှ LEGO minifigures ခြောက်ခု Marvel စတူဒီယို
မ Marvel Studio's Shang-Chi သည်လာမည့် LEGO bigfig ကိုလှောင်ပြောင်သည်။ →